Free University kweBerlin - Cinema Germany.
Free University kweBerlin
Musakanganwa kuti kurukura Free University of Berlin
Kunyoresa pana Free University of Berlin
The Free University kweBerlin” ari mumwe tsvakurudzo universitylocated muBerlin uye imwe dzepamusorosoro mumayunivhesiti muGermany. Zvinonzi pose anozivikanwa yokutsvakurudza yaro nevanhu uye sayenzi nemagariro, uyewo mumunda sayenzi dzinongoitika uye upenyu. Nheyo muna West Berlin panguva yokutanga Hondo Yemashoko nguva uye akazvarwa kubva kuwedzera Communist raitungamirirwa Humboldt University, zita rayo kureva West Berlin kuti chinzvimbo sezvo chikamu vakasununguka nyika, sezvo aipikisa Soviet-ravanofanira “unfree” nzvimbo dzakapoteredza guta.
Freie Universität Berlin aiva mumwe mapfumbamwe mumayunivhesiti German kuhwinha muna German Africa Excellence Initiative, rudzi makwikwi kuti kumayunivhesiti zvakarongwa nehurumende yeUnited German. Kukunda musiyano zvirongwa shanu doctorate, nhatu interdisciplinary tsvakurudzo masumbu (vamwe vavo vari pamwe nevamwe mumayunivhesiti) dzayo uchitikurudzira zvechechi nzira sechinhu“International Network University”, Freie Universität Berlin ndeimwe anobudirira zvikuru mumayunivhesiti mune kutanga.
makore 1968, 1990, uye 2007 mucherechedzo akatendeuka pfungwa munhoroondo Freie Universität. The University yaiva mumwe nechepakati nzvimbo muGermany nokuda vechikoro vairatidzira mamwe Kuma1960, sangano zvakakonzera imwe kuitika dziratidze kubudirana pachena, ruenzano, nekuzvitonga kuzere.
Zvadaro, pashure reunification eGermany 1990, Freie Universität Berlin haachatauri kusimbisa wayo, kuwedzera kwayo tsvakurudzo mabasa. Kuwanda kudzidza, budirira doctorate musarudzo, uye mabhuku uyewo akakura nenzira inokosha nechiyero. Hwaro kuyunivhesiti Abudirira itsva kusvika kwaiva akatevedzana inokosha kuchinja, kusanganisira kutanga ano vakuru zvivako zviri yunivhesiti ndechei, nokubatanidzwazve mumadhipatimendi, uye kushandisa mari kutsigira chaizvo zvinangwa.
mu 2007, Freie Universität Berlin akasarudzwa muna Excellence Initiative anorenda dzinorongwa hurumende yeUnited reGermany uye hurumende yeUnited States. Yaiva imwe pfumbamwe mumayunivhesiti muGermany kugamuchira musiyano zvose zvitatu mitsetse mari, danho kuti kwaita yunivhesiti zvigare uye zvakare kuwedzera nzvimbo yayo sechinhu "dzakawanda zvakarukwa yunivhesiti." In 2012 panguva yechipiri mari ose kubva Excellence Initiative, naro akasarudzwa zvakare uye yava imwe gumi nerimwe mumayunivhesiti changamire muGermany.
bhayoroji, kemesitiri, chitoro chemishonga
Business uye Economics
Education uye Psychology
History uye Cultural Studies
Masvomhu uye Computer Science
mushonga (mutsa – Univ.medizin Berlin)
Uzivi uye Humanities
Political uye Social Sciences
Free University of Berlin iyo yakatangwa vadzidzi uye vaongorori 4 Zvita 1948. The hwaro zvakabatana zvakasimba pakutanga kweHondo Yemashoko nguva. The University of Berlin yaiva yaimbova nemauto Soviet kweBerlin uye akapiwa mvumo kuramba vachidzidzisa kubudikidza Soviet Military Administration muGermany (SMAD) muna January 1946. The mumayunivhesiti vakanga kuwedzera vanotungamirirwa komiyunizimu zvavakanga zvakohwewa kuti enyika nenharo pamusoro yepashure pehondo. Izvi zvakaita kuti kuratidzira nevadzidzi dzinonetsa yemamiriro ezvinhu. pakati 1945 uye 1948, kupfuurisa 18 vadzidzi vakasungwa kana kutambudzwa, vamwe vakaurayiwa mapurisa eSoviet chakavanzika (NKVD).
Pamugumo 1947, Vadzidzi vokutanga vakakumbira yunivhesiti asununguka rezvematongerwe enyika. Mugumo okutsutsumwa vakazobvumirana pamusoro 23 Kubvumbi 1948: pashure vadzidzi vatatu vakadzingwa kuyunivhesiti pasina kutongwa, pamusoro 2,000 vadzidzi akaramba ari Hotel Esplanade. Pakazopera April, mubati United States Army Lucius D. Clay akapa kuti zviri pamutemo tarisa kuti paumbwe imwe yunivhesiti itsva kumadokero sectors. On 19 Chikumi 1948 ari “regadziriro komiti pave yunivhesiti vakasununguka” rinoumbwa enyika, mapurofesa, administrative vepachikoro uye vadzidzi, akasangana. Aine Manifesto vanoda “Kumbira kuti pave vakasununguka yunivhesiti muBerlin” dare nyaya kuruzhinji kutsigirwa. The matunhu neminisiparati masimba Berlin akapa nheyo akasununguka kuyunivhesiti uye akakumbira buri kuuya chando kwetemu 1948/49. Zvichakadaro, vadzidzi komiti iri German Democratic Republic akatsutsumwa pamusoro paumbwe, ari GDR akarondedzera yunivhesiti idzva sezvo “ainzi vakasununguka yunivhesiti” mu zvitupa kusvikira kuwa Wall Berlin.
Hurumende Council-maneja akagamuchira ne-mutemo pamusoro 4 Mbudzi 1948. The ne-mutemo yakawana mukurumbira pasi ainziwo yayo “ari Berlin womuenzaniso”: Freie Universität yakavambwa somunhu mitemo repamutemo (Public dzesangano) uye haana pasi nehurumende zvakananga, sezvakanga hwaidzorwa munhu supervisory bhodhi rine vamiririri mamiriro Berlin nhanhatu, Vamiririri vatatu kuyunivhesiti uye vadzidzi. chimiro ichi yakanga yakasiyana nedzimwe muGermany panguva iyoyo, sezvo vadzidzi vakanga zvikuru kuchinja maitiro kupfuura kare. Asi kusvikira 1970, nezvokupindira vadzidzi vari matare rakatora kuderedza apo achichinja kuita muenzaniso nechokumadokero mumayunivhesiti German kuti kuonekwa zvakazara somunhu yunivhesiti noenderana. On 15 Mbudzi 1948, hurukuro yokutanga yakaitwa muna zvivako Kaiser Wilhelm Society kuti Mberi Science. nheyo chaiko akatora nzvimbo iri 4 Zvita 1948 muna Titania mumuzinda, firimu yemitambo pamwe guru imba iripo kumadokero sectors kweBerlin. Navaranda chiitiko havana chete masayendisiti, enyika (Dare Mayor Ernst Reuter pakati vamwe) uye vadzidzi, asi vamiriri American mumayunivhesiti, pakati pavo Stanford University uye Yale University. Wokutanga kusarudzwa purezidhendi FU Berlin aiva wenhoroondo Friedrich Meinecke.
mu 1949, Free University kare vakanyorwa 4,946 vadzidzi. Kusvikira pakuvaka Wall Berlin mu 1961, vadzidzi vakawanda wakabva eSoviet zvekutepfenyura, kazhinji akatsigira kuburikidza “mari bhezari” weSeneti.
On 26 Chikumi 1963, nomusi achisimudzira yakakurumbira ake I bhini yksi Berliner Kutaura pa Rathaus Schöneberg, John F. Kennedywas paakavapa honorary mugari pedyo Freie Universität kundoita kutaura pakuzvichenesa pamberi Henry Ford chivako paakataura remangwana Berlin uye Germany pasi nokuongorora Mashoko ari FU. Pakati mushandi revanhu ndiwo Dare Mayor kweBerlin Willy Brandt uye weGermany Konrad Adenauer.munin'ina wake, Robert F. Kennedy akashanya Free University mu 1962 kokutanga uye muna June 1964 pakugamuchira ake honorary dhigirii kubva Department of Uzivi. Kutaura iye rakaitirwa chiitiko chakatsaurirwa kuna John F. Kennedy, uyo vakaurayirwa chigaro chete gore asati.
Mukupera Kuma1960, Freie Universität aiva mumwe chikuru kuratidza German kufamba mudzidzi 68 sezvo maitiro kune yose mudzidzi okutsutsumwa panguva iyoyo. Pashure chigaro mudzidzi Benno Ohnesorg uye kuedza musi Rudi Dutschke upenyu, okutsutsumwa kwakakurumidza kuita mhirizhonga yose Germany. Zviitiko 68-sangano rwakapa chido mamwe kubudirana pachena, ruenzano, nekuzvitonga kuzere revanhukadzi German.
Panguva kwema1970 uye 1980s, yunivhesiti yakava “vakawanda University” (uremu / Mega yunivhesiti) ne 50,298 vadzidzi vakanyoresa mu 1983. After reunification, Freie Universität aiva chechipiri pakukura yunivhesiti muGermany (mushure Ludwig Maximilian University reMunich) ne 62,072 vadzidzi yechando rokuti 1991/92. nguva pfupi pashure pacho, dare reSeneti Berlin akasarudza zvikuru kuderedza nzvimbo kusvikira 2003, nhamba vadzidzi vateveri vedzidziso kuna 43,885 muchando rokuti 2002/03. Since 2000, ari Free University of Berlin ave revamped pachayo. The yunivhesiti yacho tsvakurudzo waivako yakawedzera chaizvo pamusoro nenhamba kudzidza, PhDs makapiwa, uye mabhuku. Zvaitaurwa izvi kubudirira kuitika vakanga zvinhu inokosha yakadai pakatanga ano utariri enyika ari kutarisira, nokubatanidzwazve mumadhipatimendi, uye vakarongeka Utilisation mari. The Prognos AG, vakadamwa upfumi Consulting dzesangano yakavambwa paYunivhesiti muBasel, Siwizarendi, vakapa Freie Universität pamwe wokuva ayo akanaka entrepreneurial principles.During 1970 uye 1980s, yunivhesiti yakava “vakawanda University” (uremu / Mega yunivhesiti) ne 50,298 vadzidzi vakanyoresa mu 1983. After reunification, Freie Universität aiva chechipiri pakukura yunivhesiti muGermany (mushure Ludwig Maximilian University reMunich) ne 62,072 vadzidzi yechando rokuti 1991/92. nguva pfupi pashure pacho, dare reSeneti Berlin akasarudza zvikuru kuderedza nzvimbo kusvikira 2003, nhamba vadzidzi vateveri vedzidziso kuna 43,885 muchando rokuti 2002/03. Since 2000, ari Free University of Berlin ave revamped pachayo. The yunivhesiti yacho tsvakurudzo waivako yakawedzera chaizvo pamusoro nenhamba kudzidza, PhDs makapiwa, uye mabhuku. Zvaitaurwa izvi kubudirira kuitika vakanga zvinhu inokosha yakadai pakatanga ano utariri enyika ari kutarisira, nokubatanidzwazve mumadhipatimendi, uye vakarongeka Utilisation mari. The Prognos AG, vakadamwa upfumi Consulting dzesangano yakavambwa paYunivhesiti muBasel, Siwizarendi, vakapa Freie Universität pamwe wokuva zvayo entrepreneurial nheyo yakanaka.
Unoda kurukura Free University of Berlin ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Free University of Berlin musi Map
Photos: Free University kweBerlin pamutemo Facebook
Free University of Berlin wongororo
Join kukurukura pamusoro Free University of Berlin.